अनिच्छित ग`र्भ रहेमा के गर्ने ! औषधिबाट गरिने गर्भ`प`तन कति सुरक्षित ? – Namaste Dainik
July 21, 2020 July 21, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अनिच्छित ग`र्भ रहेमा के गर्ने ! औषधिबाट गरिने गर्भ`प`तन कति सुरक्षित ?
सन्तानको रहर पुगिसकेपछि पनि गर्भ रहन सक्छ । बेलाबखत अप्रत्यासित गर्भ रहन्छ । यसरी अनिच्छित गर्भ रहेमा के गर्ने ? यसमा एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ, गर्भपतन गर्ने ।निश्चित अवधीका गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । गर्भपतनका लागि केही विधि प्रचलित छन् । अहिले औषधि सेवनबाट समेत गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर, यसमा केही सर्तकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यी औषधीहरुको प्रयोगले ९ हप्ता अर्थात ६३ दिन सम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । नेपालका सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोग गरिएका औषधि करिब ९६ प्रतिशत प्रभाकारी भएको साबित भएको छ । त्यसैले गाउँ(गाउँ सम्म यो सेवा बिस्तार गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ र सोहि लक्ष्य अनुरुप स्वास्थ्य चौकी सम्म यो सेवा बढाईएको छ ।
मेडिकल एर्बोसन (औषधिद्धारा गरिने गर्भपतन) ६३ दिन सम्मको गर्भपतनका लागि प्रभावकारी र सफल रहे पनि यस्का आफ्नै असरहरु छ । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउला जस्तो हुने, पखाला लाग्ने, वाक्वाक हुने तथा महिनावारीको जस्तो वा केहि रगत बग्ने हुन सक्छ । यस्तो असरहरु समान्यता आफै हराएर जान्छ र स्वास्थ्य परार्मशको आवश्यक्ता नपर्न सक्छ ।तर, अत्याधिक रक्तश्राव भएमा, बेहोस भएमा, गन्हाउने वा योनिमार्गबाट पिप जस्तो जान थालेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको अर्थात तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकद्धारा गरिएका मेडिकल एर्बोसनमा यस्ता गम्भिर असरहरु प्रायः देखिदैन ।
औषधि पसलेहरु तथा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरु बाहेकले यस्ता औषधिहरु बिक्री वितरण गर्न नपाउने सामान्य नियम छ । तर केहि औषधि पसले तथा अनाधिकृत वा अयोग्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले क्षणिक आर्थिक मुनाफाका लागि भारतिय बजारबाट ल्याएका कमसल वा औषधिहरु बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाईन्छ ।धिहरुद्वारा गरिने गर्भपतनको सफलताको सबभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो, गर्भको अवधि वा आकारको सहि मापन् । मेडिकल एर्बोसनका लागि पाठेघरको आकार पत्ता लगाउन भिडियो एक्स रे (अल्ट्रासाउण्ड) गर्नु पर्ने मान्यता रहेको छ । मेडिकल एर्बोसनका लागि अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो, गर्भपतन पुर्णरुपले भयो वा भएन, परिक्षण गर्नु ।
समान्यतया औषधिको सेवन गरिसकेपछि रक्तश्राव सबैलाई हुन्छ । तर रक्तश्राव हुदैमा पुर्णरुपमा गर्भपतन नभएको हुन सक्छ । यो अवस्था समान्य पनि हुन सक्छ तर धेरै अवस्थामा अत्याधिक रक्तश्राव र जोखिमपुर्ण हुन सक्छ ।
यी दुवै अवस्था तथा तथ्यलाई पहिचान गर्न नसक्ने जो कोहि व्यक्तिबाट वा गर्भको स्थितीलाई परिक्षण नगरी एम.ए. अर्थात मेडिकल एर्बोसन (औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन) गर्नु खतरनाक पनि हुन सक्छ । यस बाहेक गर्भपतनका लागि अन्य धेरै कुरामा बिचार र्पुयाउनु पर्छ ।
पहिलेको गर्भ तथा प्रसुति सम्बन्धि समस्याहरु, अन्य दिर्धरोगहरु, बिभिन्न स्वास्स्थ्य समस्याका लागि औषधिहरु सेवन गरिरहेको अवस्था आदिका बारेमा पनि जानकारी लिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय यस्ता अवस्थामा औषधिको प्रयोग गर्नु हुदैन ।
समयको अभावमा वा सुचिकृत चिकित्सकलाई झन्झट मानेर उचित परामर्श र पूर्ण परीक्षण बिना गरेको गर्भपतन सुरक्षित हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन र यसबारे समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ । त्यस कारणले गर्दा पैसा र समय बचाउन तथा गोपनियताको लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा नगएर अनाधिकृत व्यक्तिको भर पर्दा दुख पर्ने मात्र हाईन, ज्यानै पनि जान सक्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।
गर्भ राख्न न चाहने १६ बर्ष पार गरेकी मानसिक सन्तुलन ठिक भएकी हरेक गर्भवतीले आफ्नै मञ्जुरीमा ९ हप्ता सम्मको गर्भपतनका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर आवश्यक परिक्षण र परामर्श गरेर यो औषधिहरु सेवन गर्न सक्छन् । यो औषधिहरु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाईन्छ । निजी तर सुचिकृत संस्थामा यसको मुल्य तिर्नु पर्छ । यो औषधि पसलमा सोझै खाने औषधि होईन । १६ बर्ष पार नगरेको वा मानसिक अवस्था ठिक नभएको गर्भवतीले आफ्नो नजिकको नातेदारको मञ्जुरीमा यो सेवा लिन पाउछन् । बिना परामर्श अनाधिकृत ठाउँबाट यो औषधि सेवन गर्नु गैरकानुनी मात्र होईन घातक पनि हुन सक्छ ।
गर्भपतन (औषधि तथा एमभिए) सुरक्षित हुदाहुदै पनि यो अन्तिम बिकल्प मात्र हो । गर्भपतन नगराएर अनावश्यक बच्चाको जन्म दिनु पनि उपयुक्त हुदैन, र गर्भपतन रोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिनु नै उत्तम उपाय हुन्छ । यसका लागि परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सबै दम्पतीहरुले एकै खालका परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नु पर्छ वा उपयुक्त हुन्छ भन्ने छैन । आफुलाई कस्तो साधन राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ बारेमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श गरेर साधन छनोट गर्नु राम्रो हो । परिवारको आकार पुरा भए पछि वा सन्तानको रहर पुगी सके पछि स्थायी बन्धयाकरण पनि उचित हुन सक्छ । सुरक्षित यौनब्यवहार र राम्रो परिवार नियोजनका साधन रोज्न सके, गर्भपतन गराउनु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था नआउन सक्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।